अब छोरी जन्माउनेलाई ‘नो टेन्सन’ ! | Pennepal
Home समाज अब छोरी जन्माउनेलाई ‘नो टेन्सन’ !
अब छोरी जन्माउनेलाई ‘नो टेन्सन’ !
काठमाडौं । रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न पालिकाले छोराछोरीबीचको शैक्षिक विभेद हटाउन विविध योजना अगाडि सारेका छन् ।
कोरोना रोक्न टोली परिचालन, सीमामा उच्च सतर्कता अपनाइँदै